China Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board emepụta na suppliers | Fastline
Ugboro abụọ n'ígwé Fr4 PCB Board okirikiri nhọrọ ukwuu
Radio Ndenye isiike Flex PCB
Obere PCB Ụgha High Quality Ụgha isiike ...
Ndenye isiike Flex PCB Business
0.2mm Oghere PCB Mixed mkpakọ isiike -Flexible PCB ...
0.15mm Oghere PCB isiike -Flexible PCB Board maka Hobbyist
0.15mm Oghere PCB Standard isiike-Mgbanwe PCB Board
High njupụta Ndenye isiike Flex PCB
0.1mm Oghere isiike-Mgbanwe PCB Board Gerber board
0.1mm Oghere isiike -Flexible PCB Board maka igodo
OEM Professional High njupụta Roger PCB
Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board
Resin nkwụnye Oghere Rogers na abụọ kwadoro PCB na sekit na sekit Board
Kọmputa Press Oghere Rogers PCB
Gold plating Rogers PCB Ụgha Price
Rogers 4003 PCB n'ígwé: 2L ọkpụrụkpụ: 0.4mm ihe: Rogers 4003 Min track obosara: 0.12mm Min track ohere: 0.15mm Min oghere: 0.2mm Cu: 1OZ / 1 oz Soldermask: Green Silkscreen: Ọ dịghị Mkpa imecha: ENIG Anyị na-na-elekwasị anya PCB na PCBA ụlọ ọrụ n'ihi na ihe karịrị afọ 10, na tumadi na-eje ozi na European na American ahịa , nakwa dị ka ugwu na South American na Southeast Asian ahịa. Anyị na-atụ na-enyere gị na-emepụta asọmpi àgwà ngwaahịa na mpaghara gị ahịa.
1.Introduction nke Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board
Fastline sekit bụ ike nke na-enye zuru turnkey na ele mmadụ anya n'ihu turnkey biri ebi circuit iba nzukọ ọrụ. N'ihi na zuru turnkey, anyị na-elekọta nke dum usoro, gụnyere nkwadebe nke E Bipụtara Circuit Boards, ị nweta nke mmiri, online iji nsuso, na-aga n'ihu nlekota nke àgwà na nke ikpeazụ mgbakọ. Ebe maka ele mmadụ anya n'ihu turnkey, ndị ahịa nwere ike inye PCBs na ụfọdụ mmiri, ma ndị fọdụrụ akụkụ ga-edozi site anyị.
Atụmatụ-Anyị Products Advantage
1. N'ime 10 afọ ahụmahụ emeputa na PCB Chikọtanu na PCB ubi.
2. Big ọnụ ọgụgụ nke na-amị na-ahụ na gị zụọ eri bụ ala.
3. Advanced mmepụta akara emesi anụ àgwà na oge ogologo ndụ.
4. Kwuonụ ihe ọ PCB dị ka gị chọrọ.
5. 100% ule niile ahaziri PCB ngwaahịa.
6. One-stop Service, anyị nwere ike inyere aka na-azụ ihe mmiri.
PCB prototype ebute Time:
Cheta na: Base na niile data natara site anyị na-aghaghị ịbụ zuru ezu na nsogbu free, ebute oge bụ njikere ụgbọ mmiri.
Anyị kweere na àgwà bụ na mkpụrụ obi nke ihe enterprise ma na-enye oge na-akatọ, technologically elu engineering na n'ichepụta ọrụ maka ngwá electronic ụlọ ọrụ.
Ụda àgwà rite a aha ọma n'ihi Fastline. Eguzosi ike n'ihe ahịa ebere ye anyị ugboro ugboro na ọhụrụ ahịa na-Fastline ka imekọ ihe ọnụ mmekọrịta mgbe ha nụrụ nke oké ugwu. Anyị na-atụ anya na àjà elu-edu ọrụ gị!
2.Production Nkọwa nke Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board
3. Ngwa o f Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board
Anyị jere ozi elu àgwà PCBA ka ọtụtụ mba, si n'ji ngwá electronic na telekomunikashions, ọhụrụ ume, aerospace, akpakanamde, wdg
4. iru eru nke Omenala High njupụta Rogers PCB na sekit na sekit Board
Anyị setịpụrụ a kewapụrụ ngalaba ebe nanị mmepụta planner ga-eso gị na iji mmepụta mgbe gị na ugwo, izute gị PCB mmepụta na nzukọ chọrọ.
Anyị nwere n'okpuru nzere iji gosi na anyị PCBA.
Anyị na-eji agụụ na katọn kechie ngwongwo, iji hụ na niile ha nwere ike iru gị kpamkpam.
7.Deliver Na-eje Ozi
Ị nwere ike ịhọrọ ọ bụla awara awara ụlọ ọrụ na i nwere na akaụntụ gị, ma ọ bụ anyị na akaụntụ, maka arọ ngwugwu, seaway mbupu ga-abụ dị, kwa.
Mgbe ị na-ahụ PCBA, echefula na-elele na-ele ha ule,
Ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla, na-anabatanụ ịkpọtụrụ anyị!
Q1: Ị a factory ma ọ bụ ahia ụlọ ọrụ?
A1: Anyị nwere onwe anyị PCB n'ichepụta & Assembly factory.
Q2: Gịnị bụ gị kacha nta iji ibu?
A2: anyị MOQ abụghị otu dabeere na dị iche iche ihe. Obere iwu na-welcome.
Q3: ihe file anyị kwesịrị enye?
A3: PCB: Gerber file dị mma, (Protel, ike PCB, pad faịlụ), PCBA: Gerber file na BOM ndepụta.
Q4: No PCB file / GbR file, naanị nwere PCB sample, i nwere ike na-emepụta ya maka m?
A4: Ee, anyị nwere ike inyere gị aka mmepụta oyiri na PCB. Dị nnọọ eziga sample PCB anyị, anyị nwere ike mmepụta oyiri na PCB imewe na-arụ ọrụ ya.
Q5: Gịnị ọ bụla ọzọ ozi ga-awa ma e wezụga n'ihi file?
A5: Ịgbaso nkọwa na-mkpa maka kwuru:
a) Base ihe onwunwe
b) Board ọkpụrụkpụ:
c) Ọla kọpa ọkpụrụkpụ
d) Mkpa ọgwụgwọ:
e) agba nke solder nkpuchi na silkscreen
Q6: Abụ m nnọọ afọ ojuju mgbe m na-agụ gị ozi, olee otú m na-amalite na-azụ m iji?
A6: Biko kpọtụrụ anyị na ahịa na homepage online, na-ekele gị!
Q7: Gịnị bụ nnyefe okwu na oge?
A7: Anyị na-eji FOB okwu na ụgbọ mmiri ngwongwo na 7-15 workdays dabere na gị iji buru ibu, customization.
Press Oghere Rogers PCB
Isiike PCB 0.1mm
Isiike PCB 0.2mm
Rogers 4350 Ihe PCB
Rogers Efere PCB Board
Rogers Ihe PCB
Rogers PCB Ime
High njupụta Online Rogers PCB na sekit na sekit Board
Rogers PCB na sekit na sekit Board Reverse Engineering w ...
Simple Rogers PCB na sekit na sekit Board Reverse Engine ...
Ekwentị mkpanaaka na: +86 755 2332 9221
Ekwentị mkpanaaka na: +8618948738557
Okwu: 509 ZhongYang Building, No.24 FuHai Road, FuYong, Bao An, Shenzhen, Guangdong, China 518103
© Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. Apụta Products ,Sitemap ,Mobile Site
Isiike-Flex PCB Board, Customized Rigid-Flex PCB, Rogers PCB , Fr4 Flex PCB, Isiike-Mgbanwe PCB, Isiike Flex PCB,